चितवनमा भेटियो बर्डफ्लु, हजारौं कुखुरा मरे | नेपाली जनता :: Nepali Janta: Nepali News Portal
बर्डफ्लु भेटिए संगै चितवनका किसान मारमा
प्रकाशित मिति ४ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार १८:४२ लेखक sangam dhakal
चितवन । पूर्वी चितवनको खैरेनी नगरपालिका वडा नम्बर ९ मा बर्डफ्लु भेटिएको छ। राजन चौधरी र लक्ष्मण चौधरीले पालेका लेयर्स कुखुरामा बर्डफ्लु भेटिएको हो। राजनको खोरका १५ सय र लक्ष्मणको खोरका १ हजार कुखुरा मरेका थिए। उनीहरूले पालेका लेयर्स कुखुरा चैत महिनादेखि मर्न थालेका थिए।
वैशाखसम्म उक्त संख्यामा कुखुरा मरेपछि बर्डफ्लु हो कि होइन भनेर राष्ट्रिय पंक्षीरोग अन्वेषण प्रयोगशालाले परीक्षण गरेको थियो। केन्द्रीय प्रयोगशालामा समेत परीक्षण गर्दा वैशाख ३० गते उक्त क्षेत्रमा बर्डफ्लूको संक्रमण रहेको प्रमाणित भएको हो प्रयोगशालाका प्रमुख दयाराम चापागाईँले जानकारी दिए।
शुक्रबार चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा बसेको बैठकले उक्त क्षेत्रमा रहेका कुखुरा तथा हाँस लगायतका पंक्षी नष्ट गरेको छ। कुखुराको सूली पनि नष्ट गरिएको छ। बर्डफ्लुको संक्रमण थप नफैलियोस् भनेर सचेतना अपनाइएको छ।
Post View Count: 30
नेपालमाथि भारतको हस्तक्षेप कहिलेसम्म ?
काठमाडौं। नेपालको हरेक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दै आएको छिमेकी मुलुक भारतले सिमा क्षेत्रमा अझै पनि नेपालीलाई अप्ठेरो पार्न छाडेको…
आतंक मच्चाउने सांसदलाई अब यसरी हुन्छ ठाउँको ठाउँ कारबाही, सदनको काम प्रभावित गर्ने सांसदलाई निष्कासन गर्ने व्यवस्था !
काठमाडौं । संसद बैठकमा आतंक मच्चाएर सदनको काम प्रभावित गर्ने सांसदलाई मर्यादापालक लगाएर निष्कासन गर्ने व्यवस्था अब कार्यान्वयनमा आउने…
पितृ उद्धारका लागि मुक्तिनाथ
पोखरा । आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि सुरु भएको सोह्रश्राद्धमा पितृ उद्धारको कामनासहित हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङस्थित
स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट विकासमा
काठमाडौं । स्थानीय सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको तलबभत्ता रोकेर ६२ करोड रुपैयाँ सडक निर्माणमा लगाएको खुलेको छ।
भाइरल नियन्त्रणमा आएन: मर्नेको संख्या १२ पुग्यो, दुईहजार बिरामी, शिविरमा आउनै सकेनन् !
जाजरकोट । झन्डै तीन साता अघिदेखि फैलिएको भाइरल ज्वरोको प्रकोप नियन्त्रणमा आउन…